Sirta Raga: 5 Waxyaabood Oo Ay Nimanka Jecelyihiin - Cishqi.com
Sirta Raga: 5 Waxyaabood Oo Ay Nimanka Jecelyihiin
Sirta raga, dumar fara badan ayaa ku jahwareersan raaxada raga, hadaba raga maxay jecelyihiin, raaxo nuucee ah? Jawaabta weey fududahay.
Dumar badan maanta weey garanayaan sirta raga gaar ahaan raaxada raga ay jecelyihiin balse waxaa jiro dumar taa weli ka jiifo.
Waxa ayna soo kacayaan markii ay arkaan nimankooda oo guursanayo xaasas kale. Alla ninkeyga naag kale ayuu iga damcay misana rabaa inuu ila guursado.
Yees, adigaa qaladka iska leh oo baran weyday sirta raga, qaasatan waxa uu ninkaaga jecelyahay.
Sirta Raga: 5 Waxyabood oo ay nimanka jecelyihiiin
Qish: Baro maanta sirata raga, waa haddii aad rabto inuu ninkaaga adiga uun kugu ekaado, baro maaanta waxa uu jecelyahay ninkaaga. Hadaba sidee ku ogaan karaa sirta raga?
Jawaabtu: waa mid aad u fudud. Halkani waxaan kugu tusi doonaa sida ugu sahlan ee aad ku baran sirta raga, kaliya waxaad u baahan tahay in aad raacdo.
1. Sirta Raga: waxa ay jecelyihiin in sariirta lagu amaano
Baahalkeyga aad uma weyno, xalay kacsi waali ah ayaa ihayay, ka waran xalay sariirta? Su’aalahaasi waxaa laga yaabaa in ay maqlaan xaasas fara badan balse aysan siinin nimankooda jawaab ku filan.
Markeey sidaas u hadlayaan raga waxa ay rabaan in ay ogaadaan inaad ku qanacsan tihiin ragnimadiisa. Xittaa hadduu baahalkiisa yareyn wuu ku weydiin. Wuxuu kaa rabaa oo kaliya; ‘Baahalkaaga waa macaan markaad……
Of course raga oo kaliya ma jeclo in lagu amaano raaxada sariirta ee sidoo kale waxaa jecel dumarka. Markaad maqasho hadalo nuucaas ah, ku dheh: Erayo Amaan ah gaar ahaan erayo aad ku muujineyso in baahalkiisa uu kugu filan yahay oo aad raaxo ku dareento.
Tusaale 1: Xalay waxa ay ahayd habeen cajiib ah, waxaad I dareensiisay raaxo aan ilaa iyo hadda u riyaaqsanahay.
Tusaale 2: Weligeey raaxo uma dareemin sida xalay oo kale.
2. Raga waxa ay u riyaaqaan: Hadalada wasaqda ah ee kacsiga leh
Sirta raga waxaa kamid ah hadalada wasaqda ah. Hadaladaan dumarka Qaar waa isticmaalaan halka kuwa qaar ay ka xishoodaan ama nimankoodu aysanba arimo nuucaan ah kala hadlin.
Dabcan raga aad ayeey u xiiseeyaan hadalada wasaqda ah, hadaan si kale u fasiro hadalo kacsi lhe oo ku saabsan raaxada galmada. Hadaan tusaale yar ka soo qaadano waxaa kamid ah erayaddaan:
Si aad ah ayaan kuugu baahanahay, caawa markaad timaado i qanci, maxaa yeelay dareenkeyga aad ayuu u kacsan yahay.
Waxaan ka fikirooyaa sida aan baahalkaaga butaca ah ka yeeli lahaa markaad guriga timaado.
Erayadaas iyo erayo lamid ah.
Haddii aad xiiseyneyso inaad barato hadalada kacsiga leh ee ay raga jecelyihiin halkaan ka baro: Erayada kiciyo dareenka raga
3. Raga wax ay xiiseeyaan baashaal badan
Dumarka qaar weey yaqaanaan sirta raga oo horay ciyaarta kama soo gaba gabeeyaan. Waxa ay siiyaan waqti, xoogaa baashaal ah oo raaxo ah kadibna waxa ay sugaan ilaa uu ka kacsado.
Raga markeey kacsi dareemaan looma baahno in wax kale la sameeyo. Maxaa yeelay iyagaaba baahasha toos u soo aadayo. Adiga uma baahnid inaad wax kale sameyso marka laga reebo inaad marba meel iska salsalaaxdo.
4. Sirta Raga waxaa kamid ah in ay runta maqlaan
Gabar walbaa markiii laga weydiiyo sirta raga gaar ahaan waxa raga ay jecelyihiin oo ay ka siman yihiin, durbaba waxa ay ku siineysaa jawaabta saxda ah. Raga waa ay naago jecelyihiin, hadaan si kale u macneeyo, waa ay galmo jecelyihiin.
Dabcan waxaa jiro rag aanan galmada balwadoodu ahayn balse badankood tani waa ka siman yihiin xittaa haddii galmadoodu aysan waqti badan qaadaneynin.
Hadaba waa maxay waxa runta ah oo ay doonayaan in ay maqlaan. Wax kale ma ahan ee waxa ay jecelyihiin inaad u qishtaan halka aad raaxada ka dareentaan.
Raga raaxo ma dareemayaan haddaan idinku wax raaxo ah dareemeynin. Ciyaartu waa caajis markuu arko adigoo xanjo iska cunayo ama u soo jeedo sida qof caadi ah oo kale.
Dumarka qaar ma muujiyaan wax raaxo ah xittaa haddii ay dareemayaan halka kuwa qaar ninka uusan aqoonin meelaha ay xaaskiisa ka kacsato.
Waxaa laga yaabaa in uuusan marnaba taabanin goobahaasi dareenka leh, markaas oo kale waxaa lagaa rabaa in aad gacantiisa ku taabsiiso si uu u dareemo meelaha aad ka kacsato oo aad jeceshahay.
Qish: Ragow gabdhaha waxa ay jecelyihiin raaxo nuucaan ah
5. Raga Waxa ay jecelyihiin in qaababka loo bedelo
Dumarka inta badan bedbedelka boosaska weey ku jahwareeraan. Waxa ayna xiliyada galmadu socoto nimankooda weeydiiyaan su’aalahaan oo kale:
Intee, sidaanaa, maxaa sameeyaa iyo su’aalo lamid ah. Asiga wuxuu rabaa inuu dhinac u wareejiyo, iyadan waxaa laga yaabaa in ay fahmi weyso.
Markaad aragto in ninkaagu uu jecelyahay qaabab kale duwan, isku day inaad barato qaababka uu ugu jecelyahay iskuna day inaad dareento halka uu rabo inuu kuu wareejiyo adigoonan weydiin.
U jeedadiisu waxa ay tahay in uu dheereeyo raaxada oo ay sii macaanaato sheekadu, wuxuu marayaa caadkaasi. Markaas oo kale sameey ficilo dareen leh sida inaad bilaawdo riimid.
Tuaasle: Aaah, Ooh iwm.
Qoraa: Cabdi Yare – Cishqi-Team
Ninkaaga wuxuu kugu nici karaa 6-daan waxyaabood
Farxada badan waxaa laga helaa 5 taan waxyaabood
Raaxada Raga Ay Jecelyihiin A-Z
Raaxada gabdhaha ay jecelyihiin: U sameey sidaan